UMeghan Markle akanakho ukuhlamba umntwana ngaphambi kokuzalwa kwentombi - Indumasi
Eyona Indumasi Kutheni uMeghan Markle ekhethe ukungabinayo into yokuhlamba umntwana ngaphambi kokuzalwa kwentombi yakhe
Kutheni uMeghan Markle ekhethe ukungabinayo into yokuhlamba umntwana ngaphambi kokuzalwa kwentombi yakhe
UMeghan Markle ukhetha ukutsiba kwimibhiyozo yokuhlamba abantwana ngeli xesha.
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex balindele umntwana wabo wesibini kweli hlobo , kodwa abacwangcisi ukusingathwa kwalo naluphi na uhlobo lokuhlanjwa kosana olunqabileyo ngaphambi kokuzalwa kwentombi yabo .
UMeghan Markle uthathe isigqibo sokuba ngayo yonke into eyenzekayo emhlabeni ngoku, kubandakanya ubhubhane we-coronavirus kunye neminye imicimbi kwihlabathi liphela, ayiloxesha lokuphosa ipati enkulu, ethe chatha, Ngeveki .
Bhalisela iNcwadana yeRoyals yoMqwalaseli INkosana uHarry kunye noMeghan bachitha ixesha elininzi kangangoko kunokwenzeka noVimba phambi kokuba kuzalwe intombi yabo.UToby Melville - Iphuli / i-Getty Izithombe
I-Duchess Meghan ayiziva ngathi ishawa enkulu yosana kunye nezipho kufanelekile ngoku, njengoko kukho iingxabano ezininzi emhlabeni. Yena noHarry babandakanyeke kakhulu kwimicimbi yoluntu, bobabini baziva ngathi ixesha labo kunye nezixhobo zabo zinokusetyenziselwa injongo ebhetele.
INkosana uHarry ngewayekade edlala kumfazi wakhe ngakumbi kunangaphambili ngexa lokukhulelwa kwakhe, kwaye ejonga yonke into ejikeleze indlu ikhaya labo elitsha eMontecito . UMeghan uyazi ukuba unothando kunye nenkxaso kubahlobo bakhe nakumyeni wakhe, ngokwe Ngeveki , kwaye ingaziva isidingo sokuba neshawa yomntwana ekhazimlayo. I-celeb pals kaMeghan yamphosa nge-glitzy baby shower ngaphambi kokuzalwa kuka-Archie kwi-2019.
Kukuhamba okukhulu kwindawo yokuhlambela usana oluphambili abahlobo bakaMeghan bamphosela ngaphambi kokuzalwa kuka-Archie e2019. Le extravaganza yenzeke kwindlu ephezulu yendlu yama-75,000 ebusuku eMark Hotel eNew York, kwaye ibandakanya ukuhlelwa kweentyatyambo kunye nomyili weentyatyambo ze-celeb u-Lewis Miller, kunye nedessert engcamla ngoncedo lomkhokheli uJean-Georges Vongerichten.
INkosana uHarry kunye noMeghan ndibenezinto ezininzi zokubhiyozela kade, njengoko ibiyimini yokuzalwa ka-Archie ngoMeyi 6, kwaye emva koko uSuku looMama ngoMeyi 9 . I-Duke kunye neDuchess yaseSussex iphawule zozibini ezi zihlandlo ngemizamo yokunceda, kubandakanya ukuxhasa ukulingana kokugonya kunye nokunceda abasetyhini abakhulelweyo abangenakhaya. INkosana uHarry kunye noMeghan basenombhiyozo omnye omkhulu ozayo ngaphambi kokuzalwa kwentombi yabo kweli hlobo, njengoko Isikhumbuzo seminyaka emithathu sitshatile singoMeyi 19 .
Ngaba isitshixo kunye noPeele's 'Keanu' waseHollywood weFilimu yokuqala yePro-Feline?
Bukela uTina Fey kunye no-Amy Poehler's Bi-Coastal Global Globes Ukuvula iMonologue
Imbali yePunk emva kweBeastie Boys 'yeAlbham yokuqala,' Ilayisensi yokugula '
UGwen Stefani uphinde wanxiba ingubo yakhe yomtshato kwaye akukho mntu ubonileyo
Damn ke! UMnumzana Maddox Jolie-Pitt uqala i-Kindergarten, kwaye abazali baseLycée bayaphulukana nayo
UMartha uselona Khonkco libuthathaka 'likaBatman v Superman'
UTrump ulungile ngeViagra emkhosini, kodwa hayi abantu beTransgender
Iindlela ezi-4 eziMangalisayo zokuCinga okuQala
Ixabiso eliphantsi leziyobisi kunye neeNkqubo zeKhemesti: Ingxoxo kunye ne-Blink CEO yezeMpilo uGeoffrey Chaiken
Khanyisa Iindaba Eziphambili Kwaye Zonke Iindlela Zakutshanje Ezikwindlela Yokuphila, Ubugcisa, Imigaqo-Nkqubo Yeshishini Kunye Neendaba Zodumo Ezijikeleze Umhlaba.
Iindlela zeNdalo ze8 zokuNyusa iTesttosterone
I-10 yeeNxalenye eziPhambili zokubhala zikaRoger Ebert kwiiMuvi kunye 'noBomi baKhe'
'Ababulali bexesha lokuzonwabisa': Xa Ukufunga Iimpuphu Azonelanga
Umthetho weKhaya: Ukukhutshwa kwi-Co-Op Kulula kunokuba uyiqonde
indlela yokunyanga usulelo lwebacteria ekhaya
ingakanani ubunzima bezikhephe
olona bhajethi lwekhadi lemizobo ye-amd
iincopho zamawele ixesha lesi-2 isiqendu 7
Ujane fonda kunye no-lily tomlin uthotho
lifika nini ixesha elitsha lokungabi nazintloni